Umaki: amakhasi okufika | Martech Zone
Maka: amakhasi okufika
Shayela Ukuhola Okungaphezulu Ngomakhi Wekhasi Lokufika LikaLandingi weWordPress
Ngenkathi abathengisi abaningi bemane befaka ifomu ekhasini le-WordPress, lelo akulona ikhasi lokufika elilungiselelwe kahle, eliguqula kakhulu. Amakhasi okufikelwa kuwo ngokuvamile anezici eziningana nezinzuzo ezihambisanayo: Iziphazamiso Ezincane - Cabanga ngamakhasi akho okufika njengokuphela komgwaqo onokuphazamiseka okuncane. Ukuzulazula, izinsimbi eziseceleni, onyaweni, nezinye izinto kungaphazamisa isivakashi sakho. Umakhi wekhasi lokufika ukuvumela ukuthi unikeze indlela ecacile yokuguqulwa ngaphandle kokuphazamiseka. Ukuhlanganiswa - Njenge-
Uhlu Lokuhlolwa Kwezici Zewebhusayithi: I-67 Ultimate Must-Haves Yesiza Sakho
NgoLwesihlanu, Okthoba 2, 2020 NgeSonto, ngoMashi 7, 2021 Douglas Karr
Hewu. Ngiyayithanda lapho othile enza uhlu lokuhlola ku-infographic elula futhi efundisayo. Ukubuyekezwa kweWebhu yase-UK kudale le infographic ukuthuthukisa uhlu lwezici abakholelwa ukuthi kufanele zifakwe kuwo wonke amabhizinisi akhona online. Ukuze ibhizinisi lakho liphumelele ku-inthanethi udinga ukuqiniseka ukuthi iwebhusayithi yakho ifakiwe! Kunemininingwane eminingi emincane engenza umehluko - kokubili maqondana nokunikeza amakhasimende
Izinto ezibalulekile ezibukwayo zokwakhiwa kwekhasi lokufika
NgoLwesine, July 9, 2020 NgoLwesine, July 9, 2020 Douglas Karr
Abantu base-Uplers bakhiqize le infographic, i-A Deep Dive Into the Use of Visuals in Landing Pages, ehlanganisa ukuthi amakhasi afika kanjani kanye nezinto ezibukwayo ezinomthelela kumanani wokuguqulwa. Izizathu zokusebenzisa amagama angukhiye wokukhomba we-Landing Search for Organic Search - Ngokwakha ikhasi lokufika elenzelwe izinjini zokusesha, ungafaka isikhalazo kuma-algorithms bese uthola ithrafikhi efanele ekhasini lakho lokufika. Ngokungasebenzisi kahle, unga
Kungani Ijubane Lekhasi Libucayi? Indlela Yokuhlola Nokuthuthukisa Eyakho
ULwesithathu, May 15, 2019 ULwesithathu, May 15, 2019 UTyson Uyashesha
Iningi lamasayithi lilahlekelwa cishe uhhafu wezivakashi zabo ngenxa yejubane lekhasi elincane. Eqinisweni, isilinganiso esiphakathi sekhasi lewebhu ledeskithophu singama-42%, isilinganiso esiphakathi sekhasi lewebhu elihamba phambili lingama-58%, futhi isilinganiso esiphakathi kokuchofoza kokufika kokuchofoza kokukhishwa kwamakhasi sisuka ku-60 kuye ku-90%. Akuzona izinombolo ezithophayo nganoma iyiphi indlela, ikakhulukazi uma kubhekwa ukusetshenziswa kweselula kuyaqhubeka nokukhula futhi kuya kuba nzima ngosuku ukuheha nokugcina ukunakwa kwabathengi. Ngokuya nge-Google, i-